रुसको कदमले अन्तरिक्षमै अड्किन सक्छन् अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री - बडिमालिका खबर
रुसको कदमले अन्तरिक्षमै अड्किन सक्छन् अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री
युक्रेनमा जारी रुसी हमलाको कडा निन्दा गर्दै रुसमाथि विभिन्न खाले प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गरेवापत ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ । रुसी स्पेस एजेन्सी रसकसमसका प्रमुखले अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीलाई स्पेस स्टेसनमै छाडिदिने वा स्पेस स्टेसनलाई नै दुर्घटना गराएर पृथ्वीमा खसालिदिने सम्मको धम्की दिएका छन् ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा रहेका अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री ५२ वर्षीय मार्क भन्दे हेइ रुसी सोयुज यानबाट आगामी मार्च ३० मा पृथ्वीमा फर्किने कार्यक्रम छ । उनीसँगै अरु दुईजना रुसी अन्तरिक्षयात्री पनि पृथ्वीमा फर्किनेछन् ।
तर रुसी स्पेस एजेन्सी रसकोमसका प्रमुख दिमित्री रोगोजिनले ती अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीलाई या त अन्तरिक्षमै छाडिदिने या स्पेस स्टेनलाई नै पृथ्वीमा खसालिदिने चेतावनी दिएको डेलीमेलले उल्लेख गरेको छ ।
रुसी चेतावनीले ठूलै त्रास उत्पन्न भएको छ । डेलीमेलसँग कुराकानी गर्दै अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री हेइकी आमाले त्यस्तो धम्की निकै भयानक भएको बताएकी छिन् । आफूले पहिलोपल्ट त्यस्तो धम्कीका बारेमा थाहा पाउँदा निकै रोएको र त्यस्तो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिरहेको उनी बताउँछिन् ।
स्मरण रहोस् हेइ ३ सय ५५ दिनको अन्तरिक्ष स्टेसन बसाइपछि पृथ्वीमा फर्किन लागेका हुन् । यसअघि कुनै पनि अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीले यतिलामो समय अन्तरिक्ष बिताएका थिएनन् ।
तर रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनका सहयोग रोगोजिनले ट्वीटरमा एक भिडियो सार्वजनिक गरेर तहल्का मच्चाइदिएका छन् । उनले मार्क भन्दे हेइलाई अन्तरिक्षमै छाडिदिने र स्पेस स्टेसनबाट रुसी हिस्सालाई निकाल्ने बताएका छन् । जसका कारण स्पेस स्टेसन पृथ्वीमा खस्नेछ ।
युक्रेनमाथिको आक्रमण पश्चात् रुसविरुद्ध अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धले रुसका अन्तरिक्ष उड्ययन उद्योग तथा अन्तरिक्ष कार्यक्रमहरुमा क्षति पुग्ने देखिएसँगै रुस क्रुद्ध बनेको हो ।
रोगोजिनले भनेका छन्- के तिमीहरू इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा हाम्रो सहयोग अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ? यदि यस्तो हो भने स्पेस स्टेसनलाई अनियन्त्रित भएर अमेरिका र युरोपमा खस्नबाट कसले बचाउँछ ?
रोगोजिनका अनुसार अमेरिकाले लगाएका गैरकानुनी प्रतिबन्धका कारण ५०० टन तौलको स्पेस स्टेसन दुर्घटना भएर पश्चिमी देशमाथि खस्नेछ ।
रुसले अन्तरिक्षमै छाडिदिने धम्की दिएका अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री हेइकी आमाले अन्तरिक्षको संवदनशील मामिलामा भएको राजनीतीकरण लज्जाको विषय भएको बताउँछिन् । हेइकी पत्नी यो चर्चाबाट निकै चिन्तित छिन् । उनका लागि यो निकै कठिन समय हो ।
ऋाफ्नो छोराको अन्तरिक्षयात्राका बारेमा स्मरण गर्दै उनले सन् २०१७ मा आफू पहिलोपल्ट पति टमसँगै कजाखस्तान आएको र त्यतिबेला छोरा हेइ पहिलोपटक ६ महिनाका लागि स्पेस स्टेसन प्रस्थान गरेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार त्यो बेला विभिन्न देशहरूले अन्तरिक्षमा एकसाथ मिलेर काम गरेका थिए । त्यस्तो दृश्य अद्भूत थियो । ती सबै वैज्ञानिक तथा अन्तरिक्षयात्रीसँग हेइको सम्बन्ध राम्रो थियो ।
ऋाफ्नो छोरा यस्तो धम्कीले नडराउने हेइका बुवा बताउँछन् । रुसका सबै अन्तरिक्षयात्री निकै सहयोग रहेको उनको अनुभव छ ।
रुसी धम्कीपछि विश्वका नम्बर वान धनाढ्य तथा स्पेस एक्स कम्पनीका प्रमुख एलन मस्कले अमेरिकी अन्तरिक्षयात्रीलाई बँचाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनका अनुसार यदि रुसले मार्क हेइलाई अन्तरिक्षमा छाडेमा स्पेस एक्स रकेट पठाएर उनलाई बचाइनेछ । उता नासाले भने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार मार्च ३० मा मार्क हेइ पृथ्वीमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरेको छ । डेलीमेलबाट